Umlobi-I-Foundation Foundation • NgoHarold Waldwin Percival
UHarold W. Percival
Ngokuphathelele lo mneneli ongaqhelekanga, uHarold Waldwin Percival, asixhalabele ngobuntu bakhe. Inomdla wethu uhlala kwizinto azenzileyo nendlela awafeze ngayo. Ukuziphendulela kwakhetha ukukhetha ukuhlala engabonakaliyo, njengoko wabonisa kwiNkcazo yoMlobi UkuCinga nokuPhelela. Kungenxa yoko ukuba akafanga ukubhala i-autobiography okanye ibhaliwe ebhaliweyo. Wayefuna ukuba iimibhalo zakhe zimelele ngokwabo. Injongo yakhe yayikuthi ukuqinisekiswa kweengxelo zakhe kuhlolwe ngokukodwa kwinqanaba lolwazi lokuzimela ngaphakathi komfundi kwaye lingathonyelwa ngumntu kaPercival.
Nangona kunjalo, abantu bafuna ukwazi okuthile malunga nombhali wenqaku, ngakumbi ukuba bachaphazeleka kakhulu ngcamango zakhe. Njengoko uPercival wadlulela kwi-1953, eneminyaka engamashumi asibhozo anine, akukho mntu uhlala eyaziwayo ebomini bakhe kunye nabambalwa abazazi iinkcukacha zobomi bakhe. Siqokelele ezo nkcukacha ezimbalwa ezaziwa; nangona kunjalo, oku akufanele kuthathwe njengento epheleleyo ye-biografi, kodwa kunoko-sketch emfutshane.
UHarold Waldwin Percival wazalelwa eBridgetown, eBarbados, eBritish West Indies, ngo-Ephreli 15, 1868, kwintsimi yabazali bakhe. Wayengowesithathu kwabantwana abane, kungekho namnye owasinda ngaye. Abazali bakhe baseNgesi, u-Elizabeth Ann Taylor noJames Percival, babengamaKristu azinikeleyo. Nangona kunjalo into endiyivayo njengomntwana omncinane yayibonakala ingenangqiqo, kwaye akukho zimpendulo ezanelisayo kwimibandela yakhe emininzi. Wayevakalelwa kukuba kufuneka kubekho abo babesazi, kwaye ngexesha elidala kakhulu bazimisele ukuba uya kufumana "abaQulumko" baze bafunde kuzo. Njengoko iminyaka idlulile, ingcamango yakhe ye "Iingqondi" yatshintshile, kodwa injongo yakhe yokufumana Ulwazi ngokwabo ihleli.
Xa uHarold Percival eneminyaka elishumi ubudala, uyise wafa waza unina wafudukela eUnited States, wahlala eBoston, kwaye kamva e-New York City. Wayekhathalela unina kangangeminyaka elishumi elinesithathu kwada kwafa kwakhe kwi-1905. Umfundi onomdla, wayeyinxalenye yokufunda.
KwiSixeko saseNew York uPercival waba nomdla kwiTheosophy waza wajoyina uMbutho weTheosophiki kwi-1892. Loluntu luhlukana ngamaqela emva kokufa kukaWilliam Q. IJaji kwi-1896. I-Percival kamva yaququzelela i-Theosophical Society Independent, eyadibana nokufundisisa iimibhalo zikaMadame Blavatsky neMpuma "izibhalo."
Kwi-1893, kwaye kabini kwixesha elishumi elinesibini elinesibini, uPercival wayenolwazi olukhethekileyo lokuba "uqaphele uNkathazo," ukukhanyiselwa okunzulu kokomoya. Uthi, "Ukuqaphela uNgqiqo kubonisa 'into engaziwayo' kumntu oye waqonda. Emva koko kuya kuba ngumsebenzi waloo mntu ukuba azise into enokukwazi ngayo ukuqonda. "Wathetha ukuba ukubaluleka kwaloo mava kukuba kuye kwayenza yazi malunga nayiphi na isifundo ngenkqubo yengqondo eyayibiza ngokuthi" ukucinga kwangempela. "Ngenxa yokuba amava abonakalisa ngaphezu kokubakho kwi-Theosophy, wayefuna ukubhala malunga nabo kwaye wabelane ngolwazi ngoluntu.
Ukususela kwi-1904 ukuya ku-1917, uPercival washicilela iphephancwadi nganye ngenyanga, Ilizwi, eyazinikezelwa kubazalwana bobuqu kunye nehlabathi lonke. Abaninzi abalobi belo suku babenegalelo kumaphephancwadi kunye nayo yonke imiba equlethwe yiPercival. Le mibhalo yokuqala yamfumana indawo Ngubani ohlala eMelika.
Kwi-1908, kunye neminyaka emininzi, i-Percival kunye nabahlobo abaningana abanomsebenzi kwaye baqhutywe malunga nama-acre amahlanu eentsimi, iindawo zasemaphandleni kunye ne-cannery e-New York. Xa ipropathi ithengiswa i-Percival yahlala malunga neehektare ezisibhozo apho kwakukho indlu encinci. Yilapho ahlala khona kwiinyanga zasehlotyeni waza wanikela ixesha lakhe emsebenzini oqhubekayo kwimibhalo yakhe yesandla.
Kwi-1912 waqala ukucacisa izinto eziphathekayo zeencwadi eziza kubandakanya indlela yakhe yokucinga. Ngenxa yokuba umzimba wakhe kwakufuneka uhlale ecinga xa ecinga, wayethetha xa kunceda uncedo. Kwi-1932 iqulunqo lokuqala lugqityiwe; kubizwa Umthetho wokuCinga. Waqhubeka esebenzisa le mibhalo ngokubanzi ukucacisa nokuyihlela. Akafanga ukuba le ncwadi ibe yimfihlakalo kwaye wayezimisele ukumbathisa umsebenzi wakhe ngokuchaneka ngamazwi ngelixesha elide okanye enkulu. Igama lalo litshintshiwe UkuCinga nokuPhelela kwaye ekugqibeleni iphrinta kwi-1946.
Leli phepha elilodwa lephepha elilodwa liye laveliswa ngaphezu kwexesha leminyaka engamashumi amathathu anesine. Le ncwadi ihlanganisa isihloko somntu kunye nehlabathi lakhe ngeenkcukacha ezipheleleyo. Emva koko, kwi-1951, wapapasha Indoda noMfazi kunye noMntwana kunye ne1952, IMason and Symbols kwaye Idemokhrasi iZiqu-zoRhulumente. Ezi zintathu iincwadi zisekelwe kulo UkuCinga nokuPhelela kwaye zijongene nezifundo ezikhethiweyo ezibaluleke ngokubanzi.
Kwi-1946, i-Percival, kunye nabahlobo ababini, yakha i-Word Publishing Co., eyaqala ukupapasha kwaye ihambisa iincwadi zayo. Ngeli thuba, uPercival wenza umsebenzi wokulungiselela iincwadi zemibhalo zeencwadi ezongezelelweyo, kodwa wayehlala efumaneka ukuphendula imibuzo emininzi evela kubhalwano.
I-Word Foundation, Inc. yaqulunqwa kwi-1950 yokwazisa abantu behlabathi zonke iincwadi ezibhalwa nguHarold W. Percival kunye nokuqinisekisa ukuba ilifa lakhe eluntwini liya kugcinwa. I-Percival yabelwa iikopi zobungqina kuzo zonke iincwadi zakhe kwi-Word Foundation, Inc.
Ngo-Matshi 6, i-1953, i-Percival idlulile kwizizathu zendalo kwisixeko saseNew York iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuzalwa kwakhe kwangamashumi asibhozo anesihlanu. Umzimba wakhe wawusitshiswa, ngokweminqweno yakhe.
Kuye kwacaciswa ukuba akukho mntu unokuhlangabezana noPracival ngaphandle kokuziva ukuba behlangene nomntu obalaseleyo ngokwenene. Imisebenzi yakhe ibhekiselele ekufezekiseni okulungileyo ekujonganeni nelizwe lokwenene, kunye nokukwazi, komntu. Igalelo lakhe eluntwini lingaba nefuthe elide kwimpucuko yethu kunye nemiphakathi eya kuza.